Sir Ba 's Note ဆြာဘရဲ့မှတ်စု: 2015
လခစားအလုပ်ကိုပဲ စိတ်အားသန်နေတယ် ..........
Trade Times ဂျာနယ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ စပြီး ထုတ်ဝေမှုရပ်တယ်။
မန္တလေးတာဝန်ခံအနေနဲ့ ၂ နှစ်တာကာလ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။
ဒီကာလအတွင်းမှာ MJI က Multimedia Journalism Diploma တစ်နှစ်သင်တန်း တက်ရောက် အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
လုပ်ငန်းပိုင်းမှာတော့ တိုးတက်မှုမတွေ့ရပေမယ့် ဂျာနယ်ရပ်ခါနီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဂျာနယ်ကို ၈ ပတ်လောက် ထုတ်ဝေခဲ့သေးတယ်။
ပထမဆုံးလခစားအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လည်း အလုပ်ရပ်သွားတာ ၀မ်းနည်းသလိုခံစားရတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ထက် လခစား အလုပ်သစ်ကိုရှာဖို့ စိတ်အားသန်နေတယ် .....
မှတ်စု sayaba at 9:18 PM No comments:
ဒီနေ့ ၄၂ နှစ်ပြည့်ပြီ
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ကသွားပြီး ၁၂ ရက်နေ့ညကားနဲ့ မန္တလေးကို ပြန်ခဲ့တယ်
အသွားက စလွန်းကား စီးလုံးဌားသွားတော့ အဆင့်ပြေတယ်
အပြန်က Power5ရဲ့ VIP ကားနဲ့ပြန်လာတာ
တောင်ပေါ်လမ်းဆိုတော့ အခန့်မသင့်ရင် မူးတာလေးပါပဲ
အဆင်မပြေတာက ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကားတွေပိတ်တာ
ကိုယ်စီးတဲ့ကားက ဂိတ်ကနေ ၃ နာရီဆိုပေမယ့် ၃ ခွဲလောက်မှ စထွက်တယ်
မူဆယ်မြို့မှ နုတ်ခွန်းဆက်သပါ၏ ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကျော်ပြီး ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေနားရောက်ခါနီးမှာ
အဲဒီနေရာမှာတင် ၅ နာရီလောက်အချိန်ကုန်သွားတယ်
ဘာကြောင့်ရယ်လို့ သေသေချာချာ မေးလို့မရဘူး
Mobile Team ကပဲ ရစ်လို့ကြာတာလိုလို
ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ဘယ်ကမှ ကောင်းကောင်းအဖြေမရဘူး
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်တွေပဲ ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်
ကြီးကြီးငယ်ငယ် အားလုံး ဗိုက်ဆာလို့ အသံတွေထွက်လာပြီ
ကားပိတ်မိတဲ့နေရာမှာ ဘာမှ ၀ယ်လို့ကမရ
ကားသမားတွေကို အကူအညီတောင်းပြီး ဂိတ်ကတစ်ယောက်ယောက်ကို ၀ယ်ပြီး လာပို့ခိုင်းလို့ရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့
အချိန်က ၇ နာရီလောက်တော့ ရှိနေပြီ
ဖြစ်ချင်တော့ ယာဉ်မယ်က မူဆယ်သူဖြစ်နေလို့ တော်သေးတယ်
သူ့အိမ်ကိုလှမ်းပြီး ဖုန်းဆက်။ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေမှာတယ်
ဒါတောင် သူမှာတာက ကားဆရာတွေအတွက်ပါ
ဒါကိုကြားလို့ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း မှာပေးပါဗျာဆိုတော့မှ စားဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်
မှတ်စု sayaba at 7:53 PM No comments:
သမီး အိမ့်အိမ့်အောင် ၁၀ လပြည့်ပြီ
Nov22014 ကမွေးတဲ့ သမီး အိမ့်အိမ့်အောင် ဒီနေ့ ၁၀ လပြည့်ပြီ
မှတ်စု sayaba at 6:31 PM No comments:
Happy Blog Day 2015 !!!!!
မှတ်စု sayaba at 6:29 PM No comments:
Blog Day 2015 ကိုသွားကြတယ်
မန္တလေးက Blogger တွေ
ရန်ကုန်မှာကျင်းပမယ် Blog Days 2015 ကို သွားကြတယ်
မှတ်စု sayaba at 6:37 AM No comments:
Location: (16.8186661 96.1752195)
Mandalay Investment Fair ကျင်းပမည်
Mandalay Investment Fair ကို စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် Mandalay Hill Resort မှာ ကျင်းပမည်
Location: (21.97081 96.08705)
Blog Day 2015 "Building Online Content Community" ပွဲဖိတ်ထားတယ်
Blog Day ကလည်း နီးလာတော့ ဘလော့ရေးဖို့ သတိရမိပြန်တယ် ...
အဲဒီအချိန်မှာပဲ Myanmar Blog Society က ဖိတ်စာ ဖိတ်လာတယ် ....
မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူတွေ၊ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့သူတွေ၊ တွေ့နေပေမယ့် မနှုတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့သူတွေ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
MBS (Myanmar Blogger Society) မှ ကြီးမှုးပြီး Telenor မှ Host လုပ်သော Blog Day 2015 "Building Online Content Community" - အွန်လိုင်းအချက်အလက် အသိုက်အမြုံတည်ဆောက်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် Sule Shangri-La ဟိုတယ် Bago Room Level 1ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တတ်ရောက်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
မန္တလေးမှ Bloggers များအတွက် Aug 29 ရက် စနေ့နေ့တွင် ရန်ကုန်သို့ လာရန်ကား စီစဉ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါသည် ။
မှတ်စု sayaba at 8:17 PM No comments:
Better Future Better Myanmar 2015 စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခမဲ့ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
မြို့ကြီး ၈ မြို့တွင် ကျင်းပနေသည့် Better Future Better Myanmar 2015 စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခမဲ့ဟောပြောပွဲများ၏ (၁၀) ကြိမ်မြောက်ဟောပြောပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ စတင်ကာ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ်မန္တလေးတွင် “Transforming Teams” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲများကို Hub Myanmar Company Limited မှ တိုးတက်လာသော ခေတ်နှင့်အညီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသော လူငယ်လူရွယ်များ စီးပွားရေးအသိပညာ ပိုမိုတိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်ကာ စီစဉ်ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီပွားရေးအကြံပေး ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် နှင့် Device Business Management Academy ၏ Principal ဦးတင်ဇံကျော်တို့ မှ ဟောပြောပို့ ချသွားမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၂၃၉၉၄၀၀) သို့ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်ရာထူး၊ အီးမေလ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပေးပို့ပြီး Register ပြုလုပ်ပြီး အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို ဟောပြောပွဲတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၂၃၉၉၄၀၀) သို့ အမည်၊ အလုပ်အကိုင်ရာထူး၊ အီးမေလ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပေးပို့ပြီး Register ပြုလုပ်ပြီး အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Better Future Better Myanmar 2015 စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခမဲ့ဟောပြောပွဲများ၏ ကျင်းပမည့် (၈)ကြိမ်မြောက်ဟောပြောပွဲကို One in All ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မန္တလေးမြို့တွင် ဇူလိုင်လ (၅)ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မှတ်စု sayaba at 3:52 PM No comments:
Facebook မှာပဲ အချိန်တွေကုန်နေခဲ့တယ်
Social Media ခေတ်ကောင်းချိန်ဆိုတော့လည်း ခေတ်နဲ့အမှီလိုက် ခေတ်အကြိုက်လိုက်ပြီး ပြောင်းသုံးလာလိုက်တာ ဒီကနေ့တော့ Facebook ကိုပဲ နေ့စဉ်သုံးဖြစ်နေတော့တယ်။
Blog ရေးဖို့လည်း သတိမရဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ Blog မရေးဖြစ်တော့ဘူး။
အမှန်က Blogger ထဲကို မ၀င်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာပိုမှန်မှာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြန်ပစ်ထားမိလိုက်ပြန်တယ် ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရောက်တော့ လာဦးမယ် .......... ;-)
ကိုလမင်း (စလင်း) ရဲ့ စွတ်​စွတ်​စိုစိမ်း ကဗျာစာအုပ်​မိတ်​ဆက်​
မှတ်စု sayaba at 9:50 AM No comments:
မှတ်စု sayaba at 8:49 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ညီတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြောင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ။
မှတ်စု sayaba at 10:29 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်တံခါး လက်ရှိ မူဆယ်နဲ့ အနာဂတ် မူဆယ်
ကားကြီး၊ ကားငယ်အသွယ် သွယ်နဲ့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေ နေ့စဉ် စည်ကားနေတဲ့ မူဆယ်မြို့ဟာ လမ်း တွေပျက်၊ ကားတွေကျပ်နေပြီး ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ တဖက်နိုင်ငံနဲ့ နှိုင်းယှဉ် မယ်ဆိုရင် များစွာကွာခြားနေတယ်။
See More at : http://www.thetradetimesmedia.com/?p=11016
မှတ်စု sayaba at 2:31 PM No comments:
အီးမေးလ် နဲ့ ဂျီမေးလ်
အရင်ရက်က Digital Journalism သင်တန်းမှာ ပြောဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ဒီနေ့ Facebook မှာ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့စ်တစ်ခုတင်လိုက်တယ်။
အီးမေးလ် နဲ့ ဂျီမေးလ် မကွဲပြားသေးတဲ့အကြောင်းပါ။
သတင်းမှာ အီးမေးလ်အစား ဂျီမေးလ် ဆိုတဲ့အသုံးပါလာတော့ မှတ်မှတ်ရရကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖွဘုတ်ပေါ်တင်လိုက်မိတယ်။
အဲဒီမှာ ဒီအကြောင်းအရာကို အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ ပါပြီးသားဆိုတာကို ပြောလာတာ တွေ့ရတယ်။ သတင်းပေးတဲ့ source ကလည်း တက်လာပြီး သတင်းရေးတဲ့သူကို အဲဒီအကြောင်းအရာ မပေးပါဘူးလို့ comment မှာ ၀င်ရေးတယ်။
ကိုယ်ကတော့ တိုက်ဆိုင်လို့ တင်လိုက်တာပါ။
အင်တာနက်ဂျာနယ်ပါ သတင်း http://internetjournal.media/new/1271
မှတ်စု sayaba at 3:01 PM No comments:
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ဖုန်းတွီးကျေးရွာတွင် တည်ဆောက်မည့် ကြိုးတံတားအတွက် One More အဖွဲ့မှ ငွေကျပ်သိန်း ၄၀ လှူဒါန်း
လူတစ်ဦး တစ်လ တစ်ထောင်ကျပ်နှုန်းလှူဒါန်းငွေတွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ One More အဖွဲ့က ဆိုင်ကယ်/လူကူး ကြိုးတံတား တည်ဆောက်ဖို့ အလှူငွေ သိန်း ၄၀ ကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၄ နာရီက မန္တလေးမြို့ ၇၃ လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေး အနုပညာလမ်းက သီရိ ပန်းချီအနုပညာ ပြခန်းမှာ ကျင်းပပါတယ်။
ဒီအလှူငွေကို One More အဖွဲ့ကိုယ်စား စာရေးဆရာသင့်နော်နှင့် ဦးပုညဆွေ (ရာပြည့်မန္တလေး-စာအုပ်ဆိုင်)တို့က ဆက်ကပ်လှူဒါန်းတာဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ ဖုန်းတွီးကျင်းကျေးရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်အာလောက လက်ခံပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်နှင့် လူကူးကြိုးတံတား တည်ဆောက်မှာက ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ ဖုန်းတွီးကျင်းကျေးရွာနှင့် ဟုတ်ဖုံကျင်းကျေးရွာ ဆက်သွယ်မည့် မုန်းချောင်းဖြတ် ကြိုးတံတားဖြစ်ပြီး ပေ ၅၀၀ ခန့် အရှည်ရှိပါမယ်။ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၁၂၈ သိန်းခန့် ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီး အလှူငွေတွေ မပြည့်စုံသေးပေမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမပတ်မှာ လုပ်ငန်းစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ကြက်သားနှင့်ကြက်ဥများ တရားမဝင်တင်သွင်းနေမှုများကြောင့် ပြည်တွင်းမှ ထွက်ရှိသောကြက်သားနှင့်ကြက်ဥဈေးကွက် ၀ယ်လိုအားကျဆင်းနေပြီး ကြက်ခြံများ ပိတ်ရတော့မည့်ကိန်းစိုက်နေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ကြက်သားနှင့်ဥဈေး နှုန်းများ ဆက်တိုက်ကျဆင်းလျက်ရှိရာ ခြံဖမ်းဈေးသည် ယခင်နှစ်က ကြက်တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၄၇၀၀ ခန့် နှင့် ကြက်ဥ ၃၀ပါတစ်ကဒ်လျှင် ကျပ်၃၀၀၀ ကျော် ဈေးရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန် တွင် ကြက်တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ်၂၅၀၀ ခန့် ဈေးရှိပြီး ကြက်ဥ ၃၀ပါတစ်ကဒ် ကျပ်၂၂၀၀ ခန့်အထိ ကျဆင်းသွားသည်ဟုသိရသည်။
မှတ်စု sayaba at 11:28 AM No comments:
အောက်ပါမေးခွန်းများကို သင်ဖြေဆိုကြည့်ပါ။ အရည်အသွေး ပြည့်မှီတဲ့ မိဘဟုတ်မဟုတ် အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စု sayaba at 10:26 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲ ၈ မျိုးပါဝင်
အမရပူရမြို့နယ် နတ်ရေကန် ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတွင် ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲ ၈ မျိုးပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
မှတ်စု sayaba at 10:24 AM No comments:
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် TED မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ် ၁၀၀ စာရင်း
စာပေ, မီဒီယာ, ယဉ်ကျေးမှု
နိုင်ငံရေး နှင့် သတင်း
မှတ်စု sayaba at 10:12 AM No comments:
Blog Day 2015 "Building Online Content Community" ...
Better Future Better Myanmar 2015 စီးပွားရေးဆိုင်ရ...
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်တံခါး လက်ရှိ မူဆယ်နဲ့ အနာ...
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ဖုန်းတွီးကျေးရွာတွင...
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲတွင် ...
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် TED မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး...